दशैं बहिस्कार गर्ने ? प्रचण्डहरुले किन दशै मनाय? - Suvham News
दशैं बहिस्कार गर्ने ? प्रचण्डहरुले किन दशै मनाय?
October 2, 2017 by gsmktm
Dirgha Raj Prasai—
२०६५ सालको दशैंमा माओवादी नेता प्रचण्डले ‘दशैं सम्पन्नहरुले मात्र मनाउन सक्ने पुरातनवादी संस्कृतिको उपज हो’ भन्दै दशैं नमान्ने निर्देशन दिएका थिए । यसरी माओवादीले दशैलाई दशैंलाई बहिस्कार गर्न अपील गरेता पनि तर स्वदेश–विदेशमा दशलाईै बडो हर्षोल्लासले मनाइयो । प्रचण्डको कुरालाई कसैले मान्यता गरेनन् । युयौदेखि प्रचलीत संस्कृतिलाई वहिस्कारको कुरा गर्नु भनेको समाजलाई बिथोल्न खोज्नु बाहेक केही होइन । मओवादी नेता प्रचण्डले भारतको गोवाको भ्रमण गरेर त्यहाँका बुद्ध र हिन्दु देव–देवीहरुको मंदिर र मूर्तिहरुको अवस्थाको अध्ययन गरे हुन्छ । कसैको हात काटिएको छ, कसैको टाउको काटिएको छ, कुनै सिङ्गा छैनन् । यसक्षेत्रको पहिचान समाप्त गर्न खोजेको यो ज्वलन्त उदाहरण थियो ।
इतिहासमा उसबेलामा हजारौं हिन्दुहरुलाई विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको थियो । भोलि नेपालमा पनि यस्तै गराउन पश्चिमाहरुले नेपाललाई इसाईकरण गर्न माओवादीलाई प्रयोग गरेर फसाउन खोजेको कुरा हो । दशैं, इन्द्रजात्रा, भोटो जात्रा लगायत नेपालका सांस्कृति मूल्य र मान्यताहरुलाई राजनीतिक रंगमा मुस्ने काम गरयो भने राजनीतिक धोका हुनेछ । पृथ्वीनाराण शाह भन्दा शताब्दियौं अगाडिदेखिनैं दशैं, तिहार लगायत हाम्रा सांस्कृतिक पहिचानहरु हिन्दु तथा बौद्ध तथा सबै जातिको साझा संस्कति हो भन्ने कुरा माओवादीले सम्मान गर्नसक्नु पर्छ । तर नेपालका चाड पर्वहरुप्रति अनास्था जगाउने कार्य गर्नुृ दुःखको कुरा हो ।
नेपालमा हिन्दु र बौद्धहरु बीचको तादात्म्यता यो क्षेत्रको परम्परागत चाड, पर्व, संस्कृति र पहिचान हो । तर हिन्दु र बौद्धको बीचमा फाटो ल्याउन प्राचीन समयमा पनि शंकराचार्यले बौद्धहरुलाई तडपाए भन्दै नास्तिकहरुले हिन्दु र बौद्ध बिच फाटो ल्याउने कार्य पनि गरेका थिए । तर शंकराचार्यले हिन्दु र बौद्धको बीचमा समन्वय गरेर बौद्ध मार्गीहरु सन्यासी मात्र होइन, गृहस्ती पनि हुनसक्छन् भन्ने चलन चलाएर बौद्ध धर्मको संरक्षण गरेका थिए । शंकराचार्यले समयमा त्यसो नगरेका भए बौद्धधर्म यसरी विकसित हुनसक्ने नैं थिएन । त्यसैको परिणाम महायानवादी तथा ब्रजयान बौद्धहरु आफ्नो शिर ठाडो पारेर बौद्धधर्मलाई विकसित गरिरहेका छन् ।
दशै., तिहार लगायत यसक्षेत्रका अनेकौं चा,पर्व तथा स्थापित साझा परम्परा माथि आधmमक बनेर लाग्नेहरु पनि यहाँ देखिएका छन् । कुनै कुनै जनजातिका अगुवाहरुले कतै कतै अझै दशैलाई वहिस्कार गर्ने का हल्ला गरिरहेका हुनसक्छन् । त् त्योे इसाईहरुले मच्चाएको षडयन्त्र हो भन्ने कुरा सबै जातिले बुझिसकेको छन् । पृथ्वीनाराण शाह भन्दा शताब्दियौं अगाडिदेखिनैं दशैं र तिहार यसक्षेत्रकोनैं हिन्दु तथा बौद्ध तथा सबै जातिको साझा संस्कति बनिसकेको छ ।
विदेशमा बस्ने गुरुङ, तामाङ, राई, लिब्बु, मगर, थकाली, थारु, जो नेपाली होस् उनीहरुले दशैं नेपालीहरुको मौलिक चाड हो भन्ने कुरा चरिचार्थ गरेर देखाएका छन् । वास्तवमा माओवादी नेता प्रचण्ड तथा तथा बाबुराम भट्टराई क्रिस्चियन समर्थक रहेकाले उनीहरु हिन्दु तथा बौद्ध परम्परा दशै, तिहार, इन्द्र जात्रालाई बिथोल्न चाहेको हो । दशैं परम्परागत नेपालीको राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व भएकाले यसलाई सबैको साझा पर्वको रुपमा मानिन्छ । घटस्थापनादेखि दशमीका दिनसम्म भ्यायसम्म सबै शक्तिपीठहरुमा सबै जातका नेपालीहरु आराधनाको लागि पुग्ने गर्दछन् ।
गोर्खाकी गोरखकाली, मनकामना, पाल्पाकी तानसेन भगवती, पूर्वको पाथिभरा, १३थुमको सिंहवाहिनी, धरानकी दन्तकाली, विराटनरगरकी माइस्थान, राजबिराजकी षखडादेवी, धनुषाकी राजदेवी, वीरगङ्गकी, माईस्थान, बारामा गढीमाई, मकवानपुकी चुरियादेवी, भुटनदेवी, काभ्रेकी चन्द्रेश्वरी तथा पलाञ्चोक भगवती, दोलखाकी कालिङचोक भगवती, काठमाण्डौं उपत्यकाकी गुह्येश्वरी, दक्षिणकाली, भद्रकाली, नक्साल भगवती, कालिकास्थान, मैतिदेवी, शोभा भगवती, संकटा, रक्तकाली, काठमाण्ठडौं र भक्तपुरकी इन््रद्रायनी, भक्तपुरकी नवदुर्गा, पाटनकी वगलानमुखी, हनुमान ढोका–तजेलु भवानी, साँखुकी बज्रयोगीनी, पाटनकी बज्रवाराही, डोल्पाकी त्रिपुरासुन्दरी, वाग्लुङ्गकी माइस्थान, नेपालगञ्जकी विन्ध्यवासिनी, डोटीकी शैलेश्वरी, डडेलधुराकी उघ्रतारा, कालिकोटकी बडी मालिकादेवी लगायत नेपालभरका अनेकौ शक्तिपीठहरुको आ–आफ्नै महीमा छ ।
नेपालीहरु सकेसम्म दशैं मनाउन स्वदेश विदेशमा रहेकाहरु दशै मनाउन उत्सुकताकासाथ आ–आफ्नो घर फर्कन्छन् । वैदिक हिन्दु सनातन धर्महरुमा सर्वश्रेष्ठ महासागर हो । वैदिक हिन्दु सनातन धर्म पञ्चदेवका उपाशक हुन्छन् । ॐ कार जगत नै वैदिक हिन्दु पञ्चदेवका उपाशक हुन् । मान्छेलाई संकट परेको बेलामा कुनै न कुनै पाञ्चायन देवी–देवताको संझना गरेको हुन्छ । पाञ्चायन् देवतामा गणेश, देवी, सूर्य, शिव, बिष्णुको पूजा अपरिहार्य हुन्छ । पाञ्चायत देवी–देवताको आराधनाको आ–आफ्न्नैं समय हुन्छ । घटस्थापनादेखि ९ दिनसम्म शक्तिकी प्रतीक भगवतीको आरधाना गर्ने समय हो । हामी सबै हिन्दु तथा बौद्धहरु नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारले पाञ्चायन देवी देवताको आधाधना गछौं ।
लिम्बु,राई,मगर,गुरुङ,तामाङ, थारु जातिले वारपार निधारभरी दहीसँग मुछेर सेतो अक्षताको टिका लाएर विजयदशमीदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म बडो हर्षाेल्लासपूर्वक आमा, बाबु, ससुरा, सासु, गुरु र अन्य मान्यजनबाट टिका थापेर आसिरवाद ग्रहणगर्ने गर्छन् । निधारभरी दहीसँग मुछेर सेतो अक्षताको टिका लगाउने चलन जनजातिहरुबाटै प्रारम्भ भएको हो । निधारभरी टिका लाउने चलन दक्षिणबाट यहाँ आएको होइन । काठमाण्डौं उपत्यकामा अबीर मिसाएर राता टिका लाउने चलन छ । त्यही चलन आजभोलि नेपालभित्र र बाहिर बढ्दोछ । नेपालीभाषी नेपाली जाति बाहेक अन्य भारतीय हिन्दुहरु टिका नलगाएर पनि दशैको उत्सव मनाउँछन् । यसरी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बोकेको परम्परागत चाडलाई बहिस्कार गर्ने अनावश्यक कुरा गरेर एकले अर्काको आस्था माथि चोट पु¥याउने काम नगरौं ।
Prevविश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य-नेपाल चाहीं धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने ? क्रिश्चियन्, यहुदी र मुसलमानहरु चाहीं आ–आफ्नो धर्मका अडानमा ?
Nextमाओवादि पार्टी एकता होइन, एमालेसँगको विलय होः गोपाल किराती